DEG DEG: Madaxii Xabsiyada ee Ururka Al-Shabaab oo isku soo dhiibay DF Soomaaliya + (Magaciisa) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG: Madaxii Xabsiyada ee Ururka Al-Shabaab oo isku soo dhiibay DF...
DEG DEG: Madaxii Xabsiyada ee Ururka Al-Shabaab oo isku soo dhiibay DF Soomaaliya + (Magaciisa)
Muqdisho (Halqaran.com) – Sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cumar Heegan ayaa dhawaan isku soo dhiibay Dowladda Federalka Soomaaliya, inkastoo wali aanan la soo bandhigin.
Sarkaalkaan ayaa waxaa gacanta ku haya Hay’adda Nabad Suggida Soomaaliya, kadib markii xiriir uu la soo sameeyay xubno Hay’adaasi ka tirsan ay u fududeeyeen inuu soo galo dowladda Federalka Soomaaliya.
Cumar Heegan ayaa wuxuu ahaay madaxa Xabsiyada Al-Shabaab, waxaana uu masuul ka ahaay xabsiyo kala duwan oo ku yaallo Gobolada ay Maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Sarkaalkaan ayaa ka soo jeeda deeganada Koonfur Galbeed, waxaana hadda uu ku sugan yahay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarumaha Hay’adda Nabad Suggida Somaliya.
Muddooyinkii dambe Al-Shabaab waxaa ka soo goosanaayay Saraakiil Sare oo waqti badan ka mid ahaay xubnahaasi, islamarkaana fahmay dariiqa ay ku socdaan inuu yahay mid aad u qaldan.
Maleeshiyaadka Kooxda Al-Shabaab ayaanan wali ka hadlin Sarkaalkaan ka soo goostay, balse waxa ay yaqaaniin dhaqanka ah inay beegsadaan Saraakiisha Sare ee dhankooda ka soo goosata ee Nabad Suggida Soomaaliya ku soo biirta.
Isku soo dhiibay
Madaxii Xabsiyada ee Ururka Al-Shabaab